मिडिया एनपी एनपी – Medianp
सिंगापुर घुम्न गएकी सञ्जय दत्तकी पत्नी मान्यताको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हर्नुहोस् यति हट छन् तस्वीरहरु
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, मङि्सर २६, २०७५१२:००0
एजेन्सी,२६ मंसिर । सधै फिल्म सुटिङमा ब्यस्त रहने सञ्जय दत्त परिवारसिहत सिंगापुर घुम्न गएका छन् । हालै सञ्जय दत्तकी पत्नी मान्यताले आफ्नो इन्स्टाग्राममा निकै हट तस्वीर सेयर गरेकी छन् । उनको उक्त तस्वीरहरुलाई उनीहरुको फ्यानले निकै
यस्तो तस्वीरको कारण लज्जित छिन् हंसिका मोटवानी, फोटो सुट गर्दा पत्तै पाइनन् गोप्य अंग देखिएको
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, मङि्सर २६, २०७५११:२०0
एजेन्सी,२६ मंसिर । बाल कलाकारको रुपमा फिल्म क्षेत्रमा भित्रीएकी अभिनेत्री हंसिका मोटावनी तस्वीरको कारण लज्जित भएकी छन् । तस्वीरमा गोप्य अंग नै देखिएपछि यतिबेला उनी सामाजिक सञ्जालमा ट्रो बन्न थालेकी छन् । ‘जिस देश में
चिसोको कारण फुट्ने ओठ र छालालाई यसरी गर्नुहोस् घरेलु उपचार
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, मङि्सर २६, २०७५१०:४६0
काठमाडौँ,२६ मंसिर । चिसो मौसम सुरु भए लगतै धेरैजनामा छाला फुस्रो हुने, ओठ फुट् जस्ता समस्याहरु हुने गर्छ । साथै चिसोकै कारण चायाँ पर्ने जस्ता समस्यउँछ । छाला विशेषज्ञहरुको भनाइ अनुसार चिसोले एलर्जि हुने ,
के तपाई अप्ठ्यारो गरेर नङ पलाएर समस्यामा हुनुहुन्छ ? यसरी गर्नुहोस् घरेलु उपचार
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, मङि्सर २४, २०७५१७:४५0
काठमाडौँ, २४ मंसिर । एक व्यक्ति सुन्दर हुन शरिरका हरेक अंग मिलेको हुनुपर्छ । तर शरिरको बाहिरी रुप मिलेर चिटिक्क परेको हुँदैन् । त्यसैले शरिरका सान तिना अंगहरु पनि सुन्दर देखिन जरुरी रहेको
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, मङि्सर २४, २०७५१७:२६0
काठमाडौँ,२४ मंसिर । नेपालकै चर्चित हास्यटेलिश्रृंखला भद्रगोलबाट चर्चामा आएका चर्तित कलाकार रक्षा र बलेलाई म्युजिक भिडियो सुटिङको क्रममा नयाँ बसपार्कमा भेटिएका छन् । टेलिफिल्ममा मात्र नभएर विभिन्न म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेर कयौँ दर्शकहरुको मन जित्न
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, मङि्सर २४, २०७५१६:५०0
काठमाडौँ,२४ मंसिर । कुनै चिज यस्तो हुन्छ जुन देख्दा सामान्य जस्तो लागे पनि त्यसले भन्न खोजेको वास्तविक कुरा अर्कै हुन्छ । तस्वीरकै कुरा गर्ने हो भने कुनै यस्तो तस्वीर हुन्छ जसले मान्छेलाई रातारात हिट भएको
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, मङि्सर २४, २०७५१५:३०0
काठमाडौँ,२४ मंसिर । स्वास्थ्यको लागि निकै पोषिलो र कयौँ औषधीय गुणले भरिएको किबीले क्यान्सर दम लगायतका विभिन्न रोगलाई निको पार्छ । ठूलो बोटमा अण्डा आकारमा फल्ने किबी अमृत बुटी मध्यको एक महत्वपूर्ण फल
दोहोरो अर्थ लाग्ने अश्लील दृश्यले भरिएको फिल्म ‘जे सुकै होस्’ को ट्रेलर सार्वजनिक
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, मङि्सर २४, २०७५१४:५३0
काठमडौँ,२४ मंसिर । दोहोरो अर्थ लाग्ने तर अश्लील दृश्यले भरिएको नेपाली फिल्म ‘जे सुकै होस्’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । नवराज गुरुङले निर्माण गरेको उक्त फिल्ममा चन्दा ढकाल, किस्मत तामाङ, रोशना श्रेष्ठ, सोनी गुरुङ, मेलिना
किन लगाउँछन महिलाहरुले गहना ? यस्तो छ वैज्ञानिक कारण
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, मङि्सर २४, २०७५१४:३०0
काठमाडौँ,२४ मंसिर । महिलाको सिङ्गार भनेको नै गरगहनामा हुने गर्छ । त्यसकारण महिलाहरुले आफुलाई सुन्दरी बनाउनको लागि सुन, चाँदिका विभिन्न किसिमका गरगहनाहरु लगाउने गर्छन् । तर हिन्दु संस्कारअनुसार विवाह गर्दा महिलाले अनिवार्य रुपमा गरगहना लगाउनुपर्ने
छिमेकीको अगाडी गाली गरेको भन्दै छोराले नै यसरी पिटे आफ्नै आमालाई भिडियो भयो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, मङि्सर २४, २०७५१३:३२0
एजेन्सी,२४ मंसिर । परिक्षामा थोरै नम्बर ल्याएपछि छिमेकीको अगाडी गाली गरेको भन्दै आफ्नै छोरालो आमालाई पिटेको एक भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । भारतको कर्नाटकको बेंगलोरमा भएको उक्त घटनाको भिडियोमा छोराले आमालाई पटक पटक झाडुले